Ukukhwehlela ingenye izimpawu bokuqala futhi evame kakhulu imikhuhlane. Iza izinhlobo ezimbili: nesasehlobo. Eyokuqala wabo uhlukile umphumela kuyacasula phezu mucosa bronchial hhayi kakhulu kuhle umzimba wonke. Ukukhwehlela noma iyiphi izinzuzo ekhethekile esingenayo, kodwa uma eqhathaniswa owomile, amenable ukuba more yokwelapha okusheshayo.
Sinesicefe lapho ukhwehlela kwenzeka ezinganeni, ikakhulukazi izinsana. It njalo kuletha eningi injabulo kanye nakho kwabazali kukhethwa kwelashwa "emphethweni." Ukukhwehlela kumasayiraphu izingane kuphela wezingane abamiselwe ukuthobisa ngonyaka futhi noma kunjalo anginikhethanga ngokwabo. Ngokuvamile abazali benza iphutha ngokwenza ikhambi ingane yabo siqu sika. izidakamizwa okuyikona kungenziwa kuphela nika onguchwepheshe, njengoba iqukethwe isithako yayo iyasebenza, kungaba iqondiswe ukwelashwa ngohlobo olulodwa ukukhwehlela, kanye lo mntwana uyoba ohluke ngokuphelele.
Khwehlela kumasayiraphu izingane ezingaphansi konyaka owodwa zidalwe, ikakhulukazi plant-based. izidakamizwa Zokwenziwa ngalesi yobudala azithandeki kakhulu ngisho contraindicated, ngaphandle ezimweni ezimbi kakhulu, kodwa isinqumo ithatha udokotela njalo. Isibonelo esiyinhloko kukhona kumasayiraphu "Gedeliks" futhi "Prospan". Bobabili izidakamizwa ibe ivy leaf akhiphe isenzo sabo bebhekise liquefaction futhi expectoration ka isikhwehlela. Ngenxa yalokho, kuba ukwelapha ukukhwehlela ezimanzi, okuyinto ingasetshenziswa kokubili ngabantwana nangabantu abadala.
Dry ukukhwehlela e izingane ezingaphansi konyaka ziphathwa izidakamizwa ezahlukene ngokuphelele, nayo ebekwe udokotela. Inhloso esemqoka ekwelapheni lolu hlobo ukukhwehlela umphumela phakathi nendawo ukukhwehlela, ise izingxenye neuropathy zobuchopho. Kuyinto efiselekayo ukwenza kube ezimanzi, noma angagcina yezinkinga ngenxa aphansi izakhiwo zemvelo okuvikela umzimba. Kube ukukhwehlela kumasayiraphu izingane ezingaphansi konyaka owodwa futhi zibe nethonya eqinile antitussive. Izibonelo ukwakhiwa okunjalo kungaba ukukhonza isiraphu "Sinekod", okuyinto umise ngokwaso eminyakeni yamuva ne kuphela ohlangothini engcono. Ngaphezu ukunciphisa umsebenzi tussive, sithuthukisa expectoration nomoya-mpilo kwandzisa le mucosa bronchial. Is contraindicated izingane ezingaphansi kweminyaka engu-izinyanga ezimbili.
Kukhona nezinye izindlela ukususa lesi sifo. Indlela esiphatha ngayo ukukhwehlela e izingane ezingaphansi konyaka, imininingwane ukutshela wezingane wendawo. Kodwa kufanele ukhumbule njalo ukuthi kukhona izindlela ukuthi sinombono alula futhi unpretentiousness abe ezingeni eliphezulu kakhulu ukusebenza kahle. Ngokwesibonelo, massage ukukhanya ngemuva patting ekukhanyeni evimbela kumiswa yokujama tsi isikhwehlela. Zama ukuqinisekisa ukuthi ingane abanye umsebenzi: uqwashile futhi siphenduka emanzini, splay futhi vula izandla isikhundla lisalele. Konke lokhu kunomthelela ukudedelwa okusheshayo phlegm. Indlela "ekushiseni okuhangulayo 'esetshenziswa omama bethu futhi ogogo: kuba lapho wafafaza lwesinaphi powder ku amasokisi, lwesinaphi ukubeka, njll
Khwehlela kumasayiraphu izingane zisesikhathini ngonyaka, ngezinye izikhathi, ithemba kangcono kwelulama lomama. Kodwa ungakhohlwa mayelana ephefumula, ephinde nethonya elihle. Nokho, noma iyiphi indlela yokwelashwa ozofakwa ngokuqinile, ngemuva kokuxoxisana onguchwepheshe.
Izimpawu yokuqala appendicitis e ingane iminyaka engu-10
Ukuvuvukala ngokuhlanganyela iqakala: izimbangela kanye nezici ukwelashwa
Izifo ezivamile zokuphefumula ezinganeni nezimbangela zabo
Nabathengisi Eliqinisekisiwe "AliEkspress": ukuthenga ezishibhile, kodwa okuthembekile